trainride Archives | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ Florence နေဖို့တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ရာအရပျဖြစ်ပါတယ်လုပ်ဖို့တန်ချိန်ရှိပါတယ်. ဒါပေမဲ့, သင်ဤမြို့တော်ကျော်လွန်စွမှရှာဖွေနေလျှင်, အကြှနျုပျတို့သညျဖုံးအုပျတယ်ပါပြီ. ဝေးဖလောဆီကပဲရထားစီးဖြစ်ကြောင်းခရီးစဉ်ကိုမှအချို့သောအံ့သြဖွယ်သောနေရာများရှိပါသည်. ဒီမှာ…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပအစိတ်အဆိုတော်နှင့်ရုပ်ရှင်ကမ္ဘာအနှံ့မှ, ဒါကြောင့်အဲဒါကိုရောနှောရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်! ရှာဖွေတွေ့ရှိ5နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ဥရောပမှာနေရာများနှင့်ဥရောပနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံအားလပ်ရက်များအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကားအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံပေးရန်သင့်အားလပ်ရက်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများစာအုပ်ဆိုင်…
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား